Nezvedu - Shanghai Allsourcing Industrial Co, Ltd.
SHANGHAI KUDZIDZA ndiye anotungamira anotengesa uye nyanzvi ekisipota uye anopinza kunze zvigadzirwa zvemitambo uye zvevaraidzo accessories, uye Maindasitiri otomatiki zvigadzirwa, Isu tinobatsira vatengi vedu kutsvaga kweese mafashoni zvishongedzo uye maindasitiri zvigadzirwa kune ese China pano.
Allsourcing inogona kupa izere mutsara wefashoni zvishongedzo, Allsourcing yakasarudzika kugona kwekugadzira uye kududzira mafashoni mafashoni uye zvinhu zvemakesi ese maakaunzi uye nemitengo mapoinzi anotibvumidza isu kuvandudza kune akasiyana akasiyana vatengi. Iyo kambani ine zvinopfuura mazana mashanu emafekitori anopatsanura Izvi zvinogona kutiita isu kugona kupa kwakanakisa sevhisi kune vatengi vanobva kumativi ese epasi.
Kero: Huguang East Road 89, Minhang Dunhu, Shanghai, China
Shanghai Allsourcing ikambani yehunyanzvi inosanganisa dhizaini, kugadzira uye kutengesa kwemakepisi nezvimwe zvekushandisa nefekitori yedu yakatangwa muna 2006 muShanghai. Isu tinogadzira mumhando dzese dzemakepisi, pamwe nezvimwe zvipfeko zvemusoro. Tinogona zvakare kukupa iwe zvimwe zvakawanda zvigadzirwa zvinoenderana neyako dhizaini uye mifananidzo. Kune yega yega odha, isu tinodzora mhando zvakakomba kubva pakusarudza zvinhu, kudhinda, kusona, kurongedza kusvika kwekupedzisira kutumira. Philosophy: Kudyidzana kwakanyanya kunoratidza hukama hwekuvimbana nekuremekedzana nezvakanaka zvinowirirana, zvichitungamira zvakabudirira mhedzisiro. Vaka hukama hwakareba nevatengi; Mutengi anotarisana; Yemakwikwi mutengo; Kutendeseka uye kuvimbika; Kuburitsa nenguva; Ipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Kana iwe uri kutsvaga anokwanisa mushandirapamwe mudiwa, ingotibata isu Isu tinovimbisa kubatana kwakazara mukati memhinduro yemaawa makumi maviri nemana, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamutengo wemakwikwi, uye zvirongwa zvekugadzira kusangana nezvirongwa zvako zvekushambadzira. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvedu, tinokugamuchira noushamwari kuti ushanyire webhusaiti yedu. Tichave vanofara kunzwa kubva kwauri, uye kuva vanopfuura kufara kubatsira zvaunoda